နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2013 ခုနှစ်စာရင်း SORT ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? - စကားလုံး - 2019
နှုတ်ကပတ်တော်ကို 2013 ခုနှစ်စာရင်း sort ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အတော်လေးမကြာခဏစာရင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှုတ်ကပတ်တော်၌တည်၏။ အတော်များများကကိုယ်တိုင်လွယ်ကူစွာ automated နိုင်သည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဘုံ task ကအက္ခရာစဉ်စာရင်းချောမွေ့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ များသောကိုသင်တို့သိကြ၏, ဒါကြောင့်ဒီသေးငယ်တဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာငါကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
စာရင်း sort ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
1) ကျွန်တော်တို့ဟာ 5-6 စကားလုံးများကို (ငါ၏အဥပမာထဲမှာကပဲအရောင်အဆင်းမယ့်တစ်ဦးတိုတောင်းသောစာရင်းရှိတယ်ဆိုပါစို့: စသည်တို့ကို, အနီရောင်အစိမ်း, ခရမ်းရောင်) .. စတင်ရုံ mouse ကိုသူတို့နှင့်အတူရွေးချယ်ပါ။
2) ထို့နောက် "မူလစာမျက်နှာ" icon လေးအတွက် "Z ကိုမှတစ်ဦးက" ၏သာသနာကိုစာရင်းကို select (ကြည့်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Screenshot အနီရောင်မြှားပြသထားတယ်) ။
3) ထို့နောက်မျက်နှာပြင်စုစည်းစီစဉ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ သင်ရုံ (A, B, C, etc) ကွှအတွက်အက္ခရာစဉ်စာရင်းကိုစီစဉ်ရန်လိုအပ်သည်ဆိုပါက - ပြီးတော့အားလုံးကို default ထားခဲ့ပါနှင့် "အိုကေ" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ 4) ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်း်ဖြစ်လာ, နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းအတွက်စကားများလက်စွဲစာအုပ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပြီး - ငါတို့သည်အချိန်အများကြီးကယ်လွှတ်တော်မူ၏။